नेपाली समाजको अन्तरकथा - RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal
पाँच दिन काेराेना बुलेटिन बन्द
काठमाडाै‌ं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट कोभिड–१९ का बारेमा जानकारी दिन गरिने नियमित पत्रकार सम्मेलन पाँच दिनका लागि स्थगन गरिएको छ । बडादशैंका कारण...
Home बिचार नेपाली समाजको अन्तरकथा
By डा. देवीप्रसाद आचार्य
एउटा समय थियो, नेपाली समाजमा राणाशाहीले जनतालाई सताउने गर्दथे । समाजमा त्रास थियो । बोल्न पाउने अधिकार थिएन । बाटा थिएनन् । विद्यालय थिएनन् । सामाजिक चेतना थिएन । रेडियो, टेलिभिजन वा सञ्चारको माध्यम थिएन । अस्पताल थिएनन् । सामाजिक चेतना अत्यन्त न्यून थियो । युरोप र अमेरिकाका देश विकासको उत्सर्गमा पुगेको कुरा नेपाली समाजले सुन्न पनि पाउँदैनथ्यो । आकास माथि हवाई जहाज उडेको देख्दा निधारमा हत्केला राखेर आकाशतिर हेरेर अचम्म पर्नुबाहेक कल्पनाले पनि काम गर्दैनथ्यो । समाजमा यस्तो अविकास र पिछडापनको कथा थियो ।
२००७ सालमा प्रजातन्त्र आयो । प्रजातन्त्र आएपछि विद्यालय खोलिए । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना भयो । प्रजातान्त्रिक अभ्यास अस्थिर रहे पनि २०१५ साल पछाडिको विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको जननिर्वाचित सरकारबाट समाजले विकासको आशा गरेको थियो । तर, राजा महेन्द्रले २०१७ सालमा नि¥कुश शासनको सुरुवात गरे । राजतन्त्रको विरोध नगरेमा जनता डराउनुपर्ने अवस्था नभए तापनि मानव अधिकार र वाक् स्वतन्त्रता खोसियो । प्रजातन्त्रप्रति रुचि राख्ने सचेत वर्गलाई धर पकड गरिन्थ्यो । देशद्रोही भनिन्थ्यो । राजनीतिक रूपमा सामाजिक बेचैनी थियो । समग्रमा नेपाली समाज अभाव र राजनीतिक त्रासमा बाँच्न बाध्य थियो ।
निरङ्कुश राजतन्त्रविरुद्घमा प्रजातन्त्रको पुनर्वहाली गर्नका लागि नेपाली समाजले लामो संघर्ष ग¥यो । नेताले जेलनेल सहे । पञ्चायती व्यवस्थामा राजसत्ताविरुद्घ प्रतिनिधि घटनामध्ये जनकपुर काण्ड, झापा प्रकरण, सुखानी हत्याकाण्ड, जहाज अपहरण, टिमुरबोटे हत्या प्रकरण, पिस्कर हत्याकाण्ड, देउमाई काण्डलगायतका प्रकरणमा धेरै नेपाली ज्यान गुमाए । कतिपयलाई कारागारमा राखियो । कतिको सर्वस्वहरण भयो । समाज मनोवैज्ञानिक त्रास र पिछडापनको पीडामा गुज्रन बाध्य थियो । हुँदै गयो । तर पनि समाजले प्रजातन्त्रका लागि अनवरत संघर्ष गर्न छाडेन । र, अन्तत ः २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना भयो ।
समाजमा प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना २०४६ पछाडि विकास र समृद्घिको ठूलो सपना थियो । गरिबी, अभाव, अशिक्षा, विभेद र पछौटेपनले थल्थलिएको मुलुकको अन्तरकथालाई बदलेर विकास गर्नुपर्ने गहन जिम्मेवारीलाई तत्कालीन नेपाली कांग्रेस र एमालेले सम्बोधन गर्न सकेनन् । सामाजिक, आर्थिक र न्यायिक अन्यायमा परेको समाजको भावनालाई आकर्षण गर्दै तत्कालीन माओवादी दलको नाममा जनयुद्घ सुरु भयो । २०५२ देखि २०६२ सम्म चलेको माओवादी जनयुद्घले राणाशाही र पञ्चायती व्यवस्थाको सास्ती सहेको समाजलाई त्योभन्दा पनि जर्जर बनायो । १७ हजार नेपालीले ज्यान गुमाउन प¥यो । हजारांै घाइते, बेपत्ता, अपांग तथा घरवारविहीन भए ।
राजनीति नातावाद, आफन्तवाद, चिनजानका आधारमा अवसरको बाँडफाँडमा व्यस्त छ । शिक्षा व्यापार भएको छ । स्वास्थ्य सेवा सर्वसाधारणको पहुँचमा छैन । समाजका लागि यो भन्दा दुःख के हुन सक्छ ?
त्यसो त माओवादी जनयुद्घले नेपाली समाजमा राजनीतिक परिवर्तन ल्यायो । राजतन्त्र गयो । गणतन्त्र आयो । देशलाई धर्म निरपेक्ष बनाइयो । संघीयता लागू गरियो । केन्द्रमा रहेको राजनीतिक र प्रशासनिक शक्तिलाई स्थानी तहमा हस्तान्तरण गर्ने भनी गाउँगाउँमा सिंहदरबार भनियो । केन्द्रीय, प्रान्तीय र पालिका गरी ७ सय ६१ वटा भुरे सरकार बनाइए । प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । यस प्रकारको राजनीतिक परिवर्तन गर्दागर्दै तत्कालीन माओका चेला तितरबितर हुन पुगे । दलका केही ठुल्दाइ चोइटिएर लाखापाखा लागे । कोही जंगल पसे । कोही सत्ता र जंगलभन्दा बाहिर बसेर रमिता हेरिरहेका छन् । कोही देशको पुराना भनिएका तत्कालीन एमाले र कांग्रेसको वरिपरि घुम्दाघुम्दै देशको राजनीतिक परिदृश्य बदलियो ।
राणा र पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्घमा खरो संघर्ष गर्दै आएको नेपाली कांग्रेस अहिले प्रतिपक्षमा छ । यो दल मियोबिनाको दाइँजस्तो भएको छ । नेपाली कांग्रेसका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको १०७औं जन्मजयन्तीको अवसरमा वर्तमान कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नेपाली काग्रेस बीपी पथमा हिँडिरहेको भन्न छुटाएनन् । अहिले नेपाली कांग्रेस गन्तव्य र मन्तव्य एउटै नभएको दल बनेको छ । यो दलले कृष्णप्रसाद भट्टराई र गणेशमान सिंहजस्ता त्यागी, इमानदार बीपीका अनुयायीलाई किनारा लगाएको नेपाली समाजले भुलेको छैन । तर, अझै पनि तीनका शीर्ष भनिनेले बीपीको नाम भजाएर राजनीति गर्न छाडेका छैनन् ।
यो पनि पढ्नुहोस बडा दसैं हिन्दूहरूको ठूलो चाड
हो, प्रजातन्त्र आउनुभन्दा अगाडिदेखि नै समाजमा लिंगीय, जातीय, वर्गीय, क्षेत्रीयलगायतका समास्याको दर्दनाक कथा अहिलेभन्दा बढी थियो । बालविवाह थियो । छोरीलाई सानै उमेरमा विवाह गरेर पराई घर जानुपर्ने बाध्यता थियो । महिला पुरुषको दया, मायाका पात्र थिए । उनीहरूमा सम्पत्तिको अधिकार थिएन । शिक्षाबाट वञ्चित थिए । राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिक अधिकारबाट वञ्चित गराइएको थियो । त्यो अवस्था अहिले छैन । अहिले समाजको राजनीतिक र शैक्षिक चेतना उचालिएको छ । तर, समाजका समस्याले नयाँ रूप लिएका छन् । कथा व्यथा फेरिएका छन् । अहिले समाज मानसिक बेचैनीले थलिएको छ । आर्थिक अभावले रुमलिएको छ । युवा पुस्ता गाउँमा छैन । वैदेशिक रोजगारीका कारण सम्बन्ध विच्छेदका घटना बढिरहेका छन् । प्राण हत्याको दर तीव्र हुँदै गएको छ ।
त्यसो त कतिपय अग्रज नागरिकले अहिले समाजले पाएको भौतिक सुविधा उहिले थिएनन् । अहिले धेरै परिवर्तन भएको छ । पहिलेको समाज र अहिलेको समाजको तुलना नै गर्न मिल्दैन भन्ने धेरै छन् । यो भनी रहँदा उही पात्रले भृकटी खुम्च्याउँदै भन्छन्, तर अहिलेको जस्तो सामाजिक विसंगति पहिले थिएन । पहिलेको समाजमा परिवारमा मेल थियो । सामाजिक सद्भाव थियो । समाजको आवश्यकता ठूलो थिएन । किसान अर्मपर्म गर्थे । तँछाडमछाडको प्रतिस्पर्धा थिएन । समाजमा सहयोगी भावना र मानवीय व्यवहार थियो । नेपाली समाजको ग्रामीण जीवन शारीरिक दुःखले भरिएको भए पनि मानसिक सन्तुष्टि थियो । अहिले भौतिक सुविधामा बढोत्तरी भए तापनि सामाजिक, आर्थिक एवं पारिवारिक सुखानुभूति हुन सकेको छैन । समाजमा दुःखको रूप फेरिएको छ । पीडाका विषयवस्तु फेरिएका छन् । समाज दुःखी बन्दै छ ।
अहिले समाजमा तनाव, मानसिक पीडा, पारिवारिक झगडा, हत्या, हिंसा, पारिवारिक विखण्डन, विच्छेद, दुव्यर्सनी, साइबर क्राइमलगायतका समस्या बढिरहेका छन् । इमान खस्कँदै छ । आफ्नो सुख र सुविधाको लागि समाज प्रतिस्पर्धामा छ । मानवता कमजोर भएको छ । राज्यका संयन्त्र जनमैत्री छैनन् । बेरोजगारी ठूलो समस्याको रूपमा देखापरेको छ । देशले विकासको गति लिन सकेको छैन । इमानदार मानिस छायामा परेका छन् । राजनीति नातावाद, आफन्तवाद, चिनजानका आधारमा अवसरको बाँडफाँडमा व्यस्त छ । शिक्षा व्यापार भएको छ । स्वास्थ्य सेवा सर्वसाधारणको पहुँचमा छैन । समाजका लागि यो भन्दा दुःख के हुन सक्छ ?
मुलुकमा राजनीतिक व्यवस्था फेरिए पनि समाजको ठूलो जनसंख्या गाँस, बास र कपासको अभावमा तड्पिएको छ । राज्यबाट नागरिक ठगिएका छन् । किसानले मल पाउन सकेका छैनन् । भ्रष्ट, एवं बेइमान ठेकेदारले राजनीतिक पहुँचको आधारमा ठेक्कापट्टा पाउने र कुनै पनि आयोजना समयमा पूरा नगर्ने नियति दोहोरिइरहेको छ । अहिले कृषिमन्त्री घनस्याम भुसालले कृषि मल नल्याउने ठेकेदारसँग गरिएको सझौता रद्द गरी धरौटी जफत गरेका छन् । यो निराशाभित्रको एउटा खुसीको खबर भए तापनि किसानले यस वर्ष मल पाउन सकेनन् । लगनपछिको पोतेझंै बंगलादेशबाट पैंचो ल्याउने भनिएको मल धान पाक्ने बेलामा आउनुको के अर्थ ? अचानोको पीर खुकरीले बुझ्दैन भनेझैं समाजका पीर व्यथा, अन्तरकथा कसले बुझिदिने ? समाजको दुःख बुझेर मुलुकको हित र जनताको पक्षमा काम गर्ने राजनेता कहिले पाइएला ?
लक्ष्मीविलास कोइराला - October 23, 2020
नीमा धिताल (पण्डित) - October 23, 2020
दीर्घराज प्रसाईं - October 23, 2020
प्रदेश ३ दीपशंकर चौलागाई - October 23, 2020
Not-to-be-missed एजेन्सी - October 23, 2020
भर्खरै नवीन लुईटेल - October 23, 2020
ललितपुर । कोरोना महामारीका बीच दसैंको रौनक छाएको छ । सुरक्षा विधि अपनाउँदै नेपालीहरू दसंै पर्वलाई हर्षोल्लासका साथ मनाउन जुटेका छन् । आज फुलपाती...
बेलकोटगढीको निरञ्जना भगवती मन्दिरमा सामुहिक जमरा राखियो
प्रदेश राजधानी समाचारदाता - October 17, 2020
नुवाकोट । कोभिड–१९ को त्रासकावीच नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिकाको बेलकोटगढीमा शनिवार सामूहिक जमरा राखिएको छ । गृह मन्त्रालयले देशभरका शक्तिपीठमा दर्शनको लागि प्रतिवन्ध लगाएपछि यस...
खेल राजधानी समाचारदाता - October 19, 2020
राजनीति राजधानी समाचारदाता - October 19, 2020
ललितपुर चक्रपथ क्षेत्रभित्र आज बिहान ४ देखि राति १० बजेसम्म कफ्र्यु
राजधानी समाचारदाता - September 4, 2020
ललितपुर । जिल्लाको चक्रपथ क्षेत्रभित्र शुक्रबारका लागि कफ्र्यु आदेश जारी भएकोे छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरले बिहान ४ देखि राति १० बजेसम्म कफ्र्यु...
नेपालीको उद्धार गर्ने चार्टर्ड उडानको तालिका र भाडादर सार्वजनिक
रासस - June 15, 2020
काठमाडौँ । विदेशमा अलपत्र नेपाली फर्काउन हिमालय एयरलाइन्सले उद्धार चार्टर्ड उडानको तालिका र भाडादर सार्वजनिक गरेको छ । नेपालबाट अन्तरराष्ट्रिय उडान भर्ने हिमालय एयरलाइन्सले...
प्रधानमन्त्री ओलीको शरीरमा अब चार ओटा मिर्गाैला
भर्खरै प्रशान्त वली - March 4, 2020
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अहिले त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा मिर्गाैला प्रत्यारोपण भइरहेको छ । नयाँ मिर्गौला प्रत्यारोपण सफल भएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीको...
७५ अंकले बढ्यो सेयर बजार
काठमाडौं । लामो समय बन्द रहेको सेयर बजार खुले लगत्तै बजारमा सकारात्मक संकेत देखिएपछि व्यवसायी उत्साहित भएका छन् । बुधबार पनि सेयर कारोबारमा ‘पोजिटिभ सर्किट’...
कोरोना संक्रमित महिला जनप्रतिनिधिको बस्ती सिल, प्रत्येक घरमा परीक्षण तयारी
प्रदेश ३ रासस - May 23, 2020
भक्तपुर । भक्तपुर नगरपालिका वडा नं ९ की ४२ वर्षीया महिला जनप्रतिनिधिमा पिसिआर परीक्षणमा कोरोना सङ्क्रमण भएपछि जनप्रतिनिधि बस्ने बस्ती सिल गरिएको छ ।...
बलात्कार आरोपमा सचिन पक्राउ
प्रदेश ५ ओपेन्द्र बस्नेत - May 3, 2020
तुलसीपुर । बालिकालाई बलात्कार गरेको आरोपमा तुलसीपुरमा एक युवक पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा दंगीशरण गाउँपालिका–३ चखौरा निबासी २२ बर्षका सचिन चौधरी रहेको...
कोरोनाको त्रास : बागलुङका सार्वजनिक सेवा बन्द
प्रदेश ४ नविन शिशिर - March 22, 2020
बागलुङ । सम्भावित कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय बागलुङले नियमित सेवा प्रवाह बन्द गरेको छ । आइतबार कार्यालयले सुचना...
अनुगमन टोली आएपछि पसले पसल बन्द गरेर टाप
प्रदेश राजधानी समाचारदाता - October 9, 2020
सप्तरी, राजविराज । संयुक्त बजार अनुमगन टोलीले जिल्लाका प्रमुख बजारहरुमा केही दिनयता अनुगमन तिब्र बनाएको छ । शुक्रबार सप्तरी सदरमुकाम राजविराजको विभिन्न किराना पसलमा...
भर्खरै राजधानी संवाददाता - October 23, 2020
प्रदेश ६ भक्तबहादुर शाही - October 23, 2020
प्रदेश सुजीतकुमार झा - October 19, 2020
वुल्भ्ससँग लिड्स युनाइटेड पराजित
लन्डन । इंग्लिस प्रिमियर लिग फुटबल अन्तर्गत गएराति भएको खेलमा वुल्भ्ससँग लिड्स युनाइटेड पराजित भएको छ । अवे मैदानमा भएको खेलमा वुल्भ्सले लिड्सलाई १–०...
Breaking News कौशिला कुँवर - October 22, 2020
काठमाडौं । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीमा खसीबोका किन्ने सर्वसाधारणको भीड लागेपछि कम्पनीले थप एक हजार खसीबोका खरिद गरेको छ । दसैंलाई लक्षित गरेर खाद्य...
मधुजंग पाण्डे - October 18, 2020
कष्णहरि बास्कोटा - October 21, 2020
यो पनि पढ्नुहोस सचेततापूर्वक दसैं मनाऔं